blog विशद: August 2011
बाहिर झरी पर्न सुरु गरिसकेको थियो । झ्यालका कुनाकाप्चा ठोक्किदै पानीका केही थोपाहरु विष्णु शर्माका गालाभरि शितलता छर्न आइपुगे । आफ्नो मोटो चश्मा र हातको सानो किताब टेबलमा छोडेर उनी झ्यालनजिक पुगे । "ओहो ! आज कति चाडै अँध्यारो भएछ !" झरीले गर्दा पाँच बज्दानबज्दै बाहिरी वातावरण अँध्यारो भइसकेको थियो । सडकभरि जाममा रुकेका मोटरका बत्तीहरुको चापमा सिङ्गो सहर कतै हराएझैँ देखिन्थ्यो । सधै उनले हेर्ने गरेको यो सहर आज नौलो-नौलो लाग्दै थियो । पूरा सहर चियाउँदै गरेका उनका आँखा एउटा बन्द भइसकेको स्वदेशी साबुन कम्पनीको भव्य पुरानो भवननिर पुगेर आफै रोकिए । आजसम्म त्यो भवनलाई ध्यान दिएर उनले हेरेका रहेनछन् बल्ल चाल पाए उनले । भवनको टुप्पोमा एउटा बडेमानको होर्डिङबोर्ड निकै उज्यालोको साथ चम्किरहेको थियो । आँखालाई निकै दुःख दिएर उनले हेरे त्यो बोर्ड छिमेकी देशको एउटा चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको थियो । सो कम्पनीले बनाउने जुसमा कीरा भेटिएको भन्दै अघिल्लो महिना देशमा ठूलो बबण्डर मच्चिएको उनले सम्झे । ठूलो माछाले सानो माछालाई निलेझैँ त्यो होर्डिङबोर्डले सो भवनलाई एकै गाँसमा निलिरहेझैँ लाग्यो उनलाई । उनी निकैबेरसम्म त्यही परिदृश्यमा टोलाए र अन्तमा झ्याल ठ्याप्प बन्द गरेर फेरि त्यही सानो किताब पढ्न थाले ।
पूर्वसांसद विष्णुप्रसाद शर्मा अघिल्लो झण्डै एक घण्टादेखी भर्खरै सशस्त्र विद्रोह थामथुम गरेर सहर पसेको पार्टीको गोप्य दस्तावेज पढ्दै थिए । कोठाबाहिर परिरहेको झरीले केही क्षण उनको ध्यान खिँचेको थियो । उनी बाहिर-बाहिर भाषण गर्नुपर्दा त विश्वस्त पाराले अब यो पार्टी सिद्धिन्छ सिद्धिन्छ भनी कुर्लन्थे तर भित्र-भित्र डराउथे पनि । अब फेरि केही नया तरिकाले आफ्नै मुद्दाहरु स्थापित गरिछाड्छ भनेर उनको छातीमा ढ्वाङ्ग्रो बजिरहन्थ्यो । त्यहि भएर विरोधी पार्टीकै सहि हर दस्तावेजहरु मगाएर पढ्ने र त्यसै अनुरुप चलाखीपूर्ण रुपले आफ्नो पार्टीलाई सल्लाह दिने अहिले उनको दिनचर्या थियो ।
"जनतन्त्र र राष्ट्रियता एकअर्कासँग अभिन्न रुपले गाँसिएका हुन्छन् नै । जनतन्त्रको प्रश्न महत्वपूर्ण हुदाहुदै पनि अहिले राष्ट्रियताको प्रश्न प्रधान बन्न गएको छ । देशको सिमानादेखि सत्तासम्म छिमेकी देशको राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ अहिले । न्युनतम रुपले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा रहेका जो-कोहीसँग पनि एकता गरेर मात्र अहिले देशको अस्तित्व रक्षा गर्न सकिन्छ । नत्र भविष्यले न त हामीलाई न त अरु कुनै पार्टीलाई नै क्षमा दिनेछ ।" दस्तावेजको यो लाइन फेरि दोहोर्याएर पढे उनले ।
भित्र भान्साबाट माछा भुटेको बासना आइरहेको थियो । श्रीमती थोरै झोँकमा केही बर्बराउँदै पनि थिई । तर विष्णु प्रसादले सुनेनन् । "फेरि माछा पकाएछि शारदाले । कहिलेकाहिँ त गाउँबाट आमाले पठाएको सिन्की पनि यसो बनाइदे हुन्थ्यो नि ।" कुनैबेला गाउँमा आमाले पकाएको गाउँले खाना सम्झिदै उनले मुख मिठ्याए । आफ्नो कोठाबाट छोरा ठूलो-ठूलो स्वरमा हिन्दी गीत गुन्गुनाउँदै थियो । विष्णु प्रसादलाई रिस उठिरहेको थियो । तैपनि उनी उठेर गएर छोरालाई गाली गर्ने मुडमा थिएनन् उनी त व्यस्त थिए गोप्य दस्तावेज पढ्न त्यो पनि प्रधान विरोधी पार्टीको जसको एक साधारण उम्मेदवारले उनीजस्तो केन्द्रीय स्तरको नेतालाई अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा पछारेको थियो ।
"अनी छोरालाई इण्डिया पढाउन पठाउनुपर्यो नि अब । एस. एल. सी. मा तेत्रो नम्बर ल्या'छ उतै राम्रो हुन्छ ।" श्रीमतीको वाणीसँगै झस्किए विष्णु शर्मा ।
"सोचौँला !" वेवास्ताको शैलीमा सिधा उत्तर दिए मतलब उनलाई छोरालाई बाहिर पठाउने मुड थिएन सायद ।
"सोचौँला रे ! हिजोसम्म त हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त के भो आज । यो देशमा राखेर के गर्नु र उल्लाई केही हुनेवाला छैन यहाँ । तपाईलाई पो देश जति बिग्र् यो त्यति जाति हुन्छ नेतागिरी गर्न हाम्लाई त यो बिग्रया देशमा बस्ने रहर छैन म पनि जान्छु छोरासँगै ।"
श्रीमतीले मानौ घाँटी अठ्याएभैष लाग्यो विष्णु शर्मालाई । "हँ देश जति बिग्र् यो त्यति जाति हुन्छ नेतागिरी गर्न ? " मनमनै प्रतिप्रश्न गरे उनले ।
श्रीमती अनेक कचकच गर्दै भान्सामै फर्किइन् । विष्णु शर्माको कानमा भने तिनै शब्दहरु गुन्जिरहे 'देश जति बिग्र् यो त्यति जाति हुन्छ नेतागिरी गर्न ।'
उनले कुर्सीलाई पछाडिसम्म तन्काए र एकछिनसम्म आखाँ चिम्म गरिरहे । आफ्नो पार्टीको लोगो अङ्कित धातुको ब्याच फुकालेर टेबलमा राखे र एकछिनसम्म ब्याचमा घोरिए । फेरि टेबलमा पल्टिरहेको दस्तावेजका बाँकी लाइनहरुमा उनको आँखा दौडिन थाल्यो ।
Amish Sharma Bishad
@ Amish Sharma 'Bishad'. Powered by Blogger.